Is Natural power may be God in Nepali - DiscoverIslamNp.Com - By Firoz
प्रश्नः केही मानिसहरु सुर्य, चन्द्रमा, हवा, पानी र आगोको पूजा यस कारणले गर्दछन् कि यिनीहरुमाहामीलाई चकित पार्ने शक्तिहरु छन् । के त्यसको पूजा गर्नु सहि हो ?
उत्तरः ती शक्तिहरुले हाम्रो दिमागलाई अचम्मित पार्ने भएतापनि एकदिनसबै नष्ट हुनेछन र तिनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिन सकिन्छ (जबकि ईश्वरलाई नियन्त्रणमा लिन सकिदैन) । सूर्य रातिमा उज्यालो दिन असक्षम छ । अनुसन्धानकर्ताहरु यो भन्छन् कि एउटा समय यस्तो आउँछ कि यो सूर्य टुटेर टुक्रा–टुक्रा हुन्छ ।
विज्ञानले यो पनि भन्छ कि चन्द्रमा र ताराहरु नष्ट हुनेछन् । आगो र हावालाई पनिनियन्त्रणमा लिन सकिन्छ तर आन्तरिक्ष जस्ता केहि यस्ता ठाउँहरु पनि छन् जहाँ हावा र आगो पनि शक्तिहीन हुन जान्छन् । अर्थात यी प्राकृतिक वस्तुहरु शाक्तिशाली भएतापनि नष्ट हुने र मानिसको नियन्त्रणमा आउन सक्ने छन् । तसर्थ यिनीहरु पूज्य हुन सक्दैनन् र न ईश्वर नै हुन सक्छन् । मानव मस्तिष्कलाई अचम्मित पार्ने प्रतिबिम्बहरुको पूजा शुरु गर्ने हो भने ईश्वरको संख्या करौडौं पुग्न जान्छ । हिन्दु धर्मको बारेमा भनिन्छ कि ३३करोड देवीदेवताहरु छन् । यदि यस संख्यालाई अंकमा लेख्ने हो भने मानिसलाई अचम्मित पार्न यहि नै काफी हुनेछ ।
के प्राकृतिक शक्तिहरु यति छन् जति मूर्तिहरुलाई यिनीहरुले पुज्ने गर्छन् ? यस्तो अवश्य छैन । बरु विभिन्न किसिमका मानिसहरुले यी शक्तिहरुलाई आफ्नो कल्पना बमोजिम रुप दिएर तिनीहरुको पुजा गर्ने गर्छन् । त्यसैले मूर्तिहरुको संख्या पनि करौडौंभन्दा धेरै हुनपुग्छ । यसका साथै प्रत्येक मूर्तिका लागि यस्ता–यस्ता काल्पनिक कथाहरु व्यक्त गरिन्छ जुन मानवीय मस्तिष्कले स्वीकार गर्न सक्दैन । यस्ता असंख्य कथाहरु रचिएका छन् । उदाहरण स्वरुप, ग्रन्थहरुमा विशेष गरी एउटै ईश्वरको बारेमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ तर पछि विभिन्न शक्तिहरुलाई ईश्वर बनाइयो। त्यसपछि जनावर, रुख, बिरुवा, चरा, नदिनाला जस्ता प्राकृतिक शक्तिहरुलाई पनि ईश्वर मान्न थालियो ।
पवित्र कुरआन एउटा यस्तो ईश्वरीय ग्रन्थ हो जसले मानिसहरुलाई मूर्तिपूजा जस्तो अन्धकारबाट निकालेर एकेश्वरवादको सुमार्गमा डोर्याउँछ । सन्देष्टा हजरत इब्राहीम (अलै.) को बारेमा कुरआनको भनाइ छ–
“र, स्मरण गर जब इब्राहीमले आफ्ना पिता आजरलाई भने– “के तपाई मूर्तिहरूलाई उपास्य बनाउनु हुन्छ ? म त तपाई र तपाईको समुदायका मानिसहरुलाई स्पष्ट पथभ्रष्टतामा देख्दैछु । र, इब्राहीमलाई यसरी हामीले पृथ्वी एवं आकाशहरूको राज्य–व्यवस्था देखायौं ताकि उनी आस्थावानहरू मध्येका बनून् । जब रात पर्यो उनले एउटा तारा देखे र भने– “यी मेरा स्वामी हुन् ।” अनि, जब त्यो अस्तायो तब उनले भने– “म अस्ताउने वस्तुलाई मन पराउँदिन ।” त्यसपछि उनले उज्यालो चन्द्रमा देखे र भने– “यी नै मेरा स्वामी हुन् ।” अनि, जब त्यो अस्तायो तब उनले भने– “मेरा पालनकर्ताले मलाई सत्मार्ग देखाएनन् भने म निश्चय नै पथभ्रष्टहरू मध्येको हुनेछु ।” तत्पश्चात् जब उनले सूर्यलाई प्रकाशमान देखे तब उनले भने– “यिनी मेरा स्वामी हुन् । यिनी त सबभन्दा ठूला रहेछन् ।” जब त्यो पनि अस्तायो तब उनले भने– “हे मेरा समुदायका दाजुभाइहरू हो ! मेरो त्यसमा कुनै सरोकार छैन जसलाई तिमीहरू साझेदार बनाउँछौ ।”(कुरआन ६ः७४–७९)
कैयौं ईश्वरहरुको पूजा गर्नेर प्राकृतिक शक्तिहरुलाई ईश्वर मान्ने मानिसहरु एकेश्वरवादमा आस्था राख्ने मानिसहरु भन्दा कसरी उत्तम हुन सक्छन् ।
के यिनीहरु वादविवादद्वारा यस कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्छन कि ईश्वर अनेकौँ छन्, एक होइन ?
आफ्नो जीवनमा एक ईश्वरको पूजा गर्नेहरु भन्दा के अरु कुनै समुदाय छ जुन हरेक क्षेत्रमा सफल भएको होस् ?
के सूर्य, आगो, हावा जस्ता सृष्टिहरुले आफ्नो पूजा गर्नेहरुलाई कुनै विशेष किसीमको प्रकाश, हावा र घाम दिन्छन्? यिनीहरु गाई र अरु जनावरहरुको पूजा गर्छन्, के तिनीहरुलाई उनीहरुले कुनै विशेष कुरा प्रदान गर्छन् जुन अरुलाई दिदैनन् ? यस्तो त अवश्य छैन । यस कारण जुन मानिसहरु एक अल्लाहलाई छोडेर अन्य ईश्वरहरुको पूजा गर्दछन्, तिनीहरु कमजोर सृष्टिहरुलाई नै आफ्नो ईश्वर र संरक्षक मानेर पूजा गरिरहेका छन् । पवित्र कुरआन यसलाई एउटा उदाहरण पेशगर्दै बुझाउने प्रयास गरेको छ– “अल्लाहलाई छोडी अरूलाई संरक्षक–मित्र बनाउनेहरूको उदाहरण एउटा माकुरोजस्तो छ जसले आफ्नो एउटा घर बनाउँछ र सबभन्दा कमजोर घर माकुराको नै हुन्छ । यिनीहरूले यो तथ्य बुझेको भए !” (कुरआन २९ः४१)
त्यसैले संसारिक शक्तिहरुलाई ईश्वर मानेर त्यसको पूजा गर्नु न्यायसंगत छैन किनभने ती सबैकमजोर र नष्ट हुनेछन् ।